​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनीबीच डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी (एनसीसी) बीच डिजिटल सिग्नेचर तथा सर्टिफिकेट (डिएससी) प्रदान गर्नेबारे सम्झौता भएको छ। बैंकभित्र हुने विद्युतीय प्रणाली मार्फत गरिने सूचना आदान प्रदानमा..
​सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक खरिद गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले तोकिएको चुक्ता पुँजी पु¥याउन क्षेत्रीय रुपमा रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्ने भएको छ। खरिद (एक्वीजिसन) गर्ने सम्वन्धमा दुबै पक्षबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ। बैंकले एक्वीजिसनसम्बन्धी..
आजदेखि ​सानिमा बैंकको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर आवेदन खुला
काठमाडौं । सानिमा बैंकको आजदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरको बिक्री खुला गरेको छ। लगानीकर्ताले सानिमा बैंकको हकप्रदमा शेयरका लागि आजदेखि साउन १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन्। जेठ २४ गतेसम्म कायम..
नेपाललाई फेरी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने वा सहयोग रोक्का गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । यसअघि आवश्यक कानुन नबनाएको भन्दै यस्तौ चेतावनी दिएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा..
गरीबलाई ऋण नदिदाँ हिमालयन बैंकलाई एक करोड जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै हिमालयन बैंकलाई १ करोड १५ लाख ६६१ रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो..
​खाँदबारीमा कृषि विकास बैंङ्कको शाखा
काठमाडौं । सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा कृषि विकास बैंङ्कको शाखा सञ्चालनमा आएको छ । बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लीलाप्रकाश सिटौलाले मङ्गबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । शाखाबाट सम्पुर्ण वित्तीय..
काठमाडौं । सरोकार राख्ने निकायको चर्को विरोधपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई पुनःसमितिमै फिर्ता पठाइदिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सदनमा प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक..
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र बिजिनेश युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक बीच मर्ज पुरा भएर मंगलबारदेखि संयुक्त कारोबार सुरु गरेका छन्। मर्जर पश्चात बनेको बैंक सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको नामबाट सञ्चालनमा आएको हो ।..
​नेपाल राष्ट्र बैंकको पक्षमा अमेरिकी अदालतको फैसला
काठमाडौं । पूर्वस्वीकृति नलिई अमेरिकामा रहेको आफ्नो खाताबाट १० लाख अमेरिकी डलर करिब १० करोड रुपैयाँ निकालिएको मुद्दा पुनरावेदनमा समेत राष्ट्र बैंकले जितेको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित कोर्ट अफ अपिल्सले..
​सेञ्चुरी कमर्सियल बैँकको सेञ्चुरी भिसा क्रेडिट कार्डको शुरुवात
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैँकले सेञ्चुरी भिसा क्रेडिट कार्डको शुरुवात गरेको छ । बैंकले गोल्ड र क्लासिक गरि २ प्रकारका क्रेडिट कार्ड प्रचलनमा ल्याएको हो । ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै..
काठमाडौं । कामना विकास बैंक र कास्की फाइनान्स मर्ज भएर बनेको राष्ट्रियस्तरको कामना विकास बैंकले सोमबारबाट एकीकृत कारोबार थालेको छ । मर्ज भएर बनेको कामना विकास बैंकको एकीकृत कारोबारको सुभारम्भ..
​अनाथ बालबालिकालाई हिमालयन बैंकको सहयोग
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बुढानीलकण्ठ–६, टुसालस्थित ‘नेपालमा भएका अनाथ असहाय बाल सुधार संघ’ का वालवालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले बाल सुधार संघका वालवालिकाहरुलाई..
सिटिजन्स बैंकको १ करोड ७१ लाख कित्ता हकप्रद शेयरको आवदेन खुल्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको छ । बैकले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि १०ः५.५ अर्थात ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव नवौ साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो..
​कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाडौं । कञ्चन डेभलपमेण्ट बैंकले शेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने भएको छ । बैंकको शनिबार सम्पन्न विशेष साधारण सभाले दुई बराबर एक हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो..
सगरमाथा फाइनान्सले १५ प्रतिशत बोनस र ८ प्रतिशत हकप्रद दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सगरमाथा फाइनान्सले १०ः८का दरले हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । फाइनान्सको शुक्रबार सम्पन्न दशौं वार्षिक साधारण सभाले हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । साधारण सभाले गत आर्थिक..
श्रम सम्झौता गर्दा बिप्रेषण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन
काठमाडौं । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत..
सिद्धार्थ बैंक र बिजनेस डेभलपमेण्ट बैंक मर्ज भई एकिकृत कारोबार असार ७ गते, पुँजि ३ अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र बिजिनेश युनिभर्सल डेभ्लपमेन्ट बैंकबीच मर्ज पुरा भएर यही असार ७ गतेदेखि संयुक्त कारोबार सुरु हुने भएको छ । आज एक सूचना प्रकाशन गरी सो कुराको..
प्रभु बैंकले विद्यूतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सम्झौता गर्यो, बैंकिङ कारोबार सुदृढ हुने
काठमाडौं । विद्यूतीय प्रणाली मार्फत् गरिने सूचना आदान प्रदानमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्युनीकरण गर्ने तथा सूचना प्रवाहलाई अझ विश्वसनीय बनाउनका लागि प्रभु बैंक लिमिटेड र नेपाल सर्टिफाइङ कम्पनी लिमिटेड बीच..
​प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनश पारित, अध्यक्षमा विरेन्द्र संघाई चयन
काठमाडौं । निर्जीवन बीमाको कारोबार गर्दै आएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको चौधौ वार्षिक साधारण सभाले दश प्रतिशत बोनश पारित गरेको छ । साथै साधारणसभाले संस्थापक शेयरधनीका तर्फबाट संचालक र अध्यक्ष समेत..
बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । अर्थविद्ले बैंकको हितका पक्षमा ऐनकानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएमा मात्र परिवर्तित परिस्थितिमा बैंकले विकास गर्न सक्ने बताएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले बुधबार आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित बैंक..
​नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौँ । नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैंक लिमिटेडबीच कोषको रकम बैंकको केन्द्रीय खातामा एबिबिएसमार्फत सिधै जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि एक सम्झौता भएको छ । बैंकका सबै कार्यालयबाट एबिबिएसमार्फत रकम सङ्कलन..
​सेञ्चुरी बैंकको मनमैजुमा एक्सटेन्सन काउन्टर
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले बुधबारदेखि मालपोत कार्यालय मनमैजुमा तेस्रो एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले उक्त काउन्टरबाट राजश्व संकलन लगायत त्यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने ग्राहकहरुमा सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको..
ग्लोबल आइएमईले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक खरिद गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले दश करोड पूँजि भएको प्यासिफिक बैंक किन्न लागेको हो । बैंकले पूँजी बढाउन भन्दा पनि..
महालक्ष्मी फाइनान्स, मालिका विकास बैंक र सिद्धार्थ फाइनान्स, असार भित्रै मर्ज हुने, पुँजी १ अर्ब १५ करोड पुग्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेडको विशेष साधारण सभाले अन्य दुई सस्था गाभेर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महालक्ष्मीमा मालिका बिकास बैंक र सिद्धार्थ फाइनान्स गाभिँदै..
काठमाण्डौं। सिटिजन्स बैंकले नुवाकोट जिल्लामा शाखारहित बैंकिङसेवा सुचारु गरेको छ। देशका विभिन्न दुर्गम ठाउँका बासिन्दाहरुलाई सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ युके एडको लगानिमा संचालित सक्षम एक्सेस टु..
एनसीसी सहित ६ बैंकको मर्जको लागि स्वाप रेसियो टुंगियो, हेनुहोस् कस्को कति ?
काठमाडौं । एनसीसीसँग मर्ज गर्न लागेका ५ वटा वित्तिय संस्थाको संयुक्त मर्ज समितिले शेयर स्वाप रेसियो परित गरेको छ । एनसीसी र कुमारी बैंकको समान हुनेछ भने वाँकी ४ विकास..
ग्रोमर मर्चेन्टले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने, कम्पनीको नाम प्रभु क्यापिटल हुने
काठमाडौं । ग्रोमर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीको सोमबार बसेको संचालक समिति बैठकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२को मुनाफाबाट चुक्तापुँजीको २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने..
​जनता बैं‌कले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर दिने
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालले ५० प्रतिसत अर्थात दुई बराबर एक कित्ताका दरले हकप्रद दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको आइतबार सम्पन्न साधारण सभाले यो निर्णय गरको हो । बैंकको मर्ज..
​सनराईज बैंकको पाँचौ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा डोटीमा
काठमाडौं । सनराईज बैंकले डोटी जिल्लाको बनलेक गाविस वडा नं. ३ को बानडुङग्रीसेन बजारमा आफ्नो पाँचौ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरेको छ । बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका देशका विभिन्न विकट गाँउहरुमा सेवा..
नेपाल बंगलादेश बैंकले २ करोड ४३ लाख कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंकले आफ्नो पूँजि ८ अर्ब पुर्याउनको लागि ८० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने भएको छ । बैंकको संचालक समितिको बैंठकले हाल कायम रहेका शेयरधनीलाई १० कित्ता..
Results 1896: You are at page 34 of 64